Cudur dilaacay | Beerta daaqsinka ee internetka | February 2020
Category Cudur dilaacay
Noocyada canab ah ee alaabooyinka + FOTO
Ka hor inta dhacdo muhiim ah sida beeritaanka, marka hore waxaad u baahan tahay in la go'aamiyo waxa la raadinayo markaad dooranaysid canab. Marka hore, si loo caddeeyo in noocyada kala duwan ee siinayaa dhalidda sanadlaha ah, waa maxay tayada miraha. Marka labaad, waa maxay heerka of da'da of caleemaha. Saddexaad, si loo tixgeliyo cimilada aagga ee mustaqbalka beerta canabka ah, waxaad u baahan tahay inaad doorato noocyo u adkaysta inuu dillaaco.
Sannado badan ka hor, dadka deggan tuulooyinka u dhow webiga Phasis ee Giriigga hore ayaa bilaabay in ay guri ku yeeshaan shimbiro aad u qurux badan, oo hilibkiisu uu dhadhan fiican leeyahay. Waxaa la rumeysan yahay in naxdida ay magaceeda ka soo qaadatay magaca webiga Shabeelka, oo u dhow kuwaas oo markii hore lagu soo guray guriga. Soomaliyayaashu waa wakiillada ugu weyn ee Digaagga Digaagga.
Kuwa bilowga ah, taranka taranka ee guriga ayaa u muuqda mid aad u shaqeynaya oo aan had iyo jeer ahayn geedi socod lagu guuleysto. Laakiin dhab ahaantii, shimbirkan quruxda badani maaha kuwo ka duwan digaagga caadiga ah, waxayna dareemeysaa weyn sanadka oo dhan wareega hawada furan. Sida loo xakameeyo jaahwareeraha jiilaalka nabdoon ee xaaladaha cimilada ee adag, waxa la quudiyo, sida looga hortago dhimashada iyo korinta dhalidda yar - waxaan ka sheekeyn doonaa arrimahan dambe ee maqaalkan.
Xabaaluhu waa shimbiro qurux badan oo qurux badan, laakiin, nasiib daro, quruxdoodu waxay u noqdeen kuwo wax burburiya. Ugaarsiga loogu talagalay pheasants ayaa muddo dheer ku jiray rikoodhka ugu caansan, sababtoo ah bahdilayaasha ayaa soo jiidatay ma aha oo kaliya miro qurux badan, laakiin sidoo kale rajo ah cunista cunta delicious. Qaar ka mid ah xayawaanka ayaa horeba aad u yaraa, dadkuna waxay bilaabaan inay ka fekeraan tarankooda.
Noocyada galley sii kordhaysa, beerto iyo daryeelka
Dabeecadaha maskaxda leh ee loo yaqaan 'Scarlet Lemon Lime' guriga dhexdiisa
Waa maxay sababta ay bakayle u dhashay u dhalatay bakaylaha dhintay
Qorraxda dhadhanka leh ee beertaada - yaanyo "Ball" (Yellow Ball) ": sharaxaada kala duwan, talooyinka koritaanka
Tufaax qurux badan oo leh caraf udgoon ayaa ku siin doona noocyo kala duwan oo Korea ah
Flake (foliota): sharaxaadda dhirta iyo sifooyinka faa'iidada leh
Copyright 2020 \_ Beerta daaqsinka ee internetka